Vantany vao tafaverina avy any Sotchi Rosia ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ny zoma 25 oktobra 2019, dia namory avy hatrany, tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra ireo mpamatsy solika eto Madagasikara noho ireo olana nateraky ny tsy fahampian'ny solika teny amin'ireo tobin-dasantsy tamin'ny faran'ny herinandro lasa iny, izay niteraka fitaintainana sy nampisavorovo ny saim-bahoaka sy ny nampihemotra ny raharaha ara-toe-karena.
Nambarany fa tsy nanao araka ny voafaritry ny làlana ny amin’ny tokony hametrahana tahirin-tsolika 21 andro ireo mpandraharaha ireo. Nandritra io fivoriana io no nanambaran’i Andry Rajoelia fa « hanao tolobidy ny fitondram-panjakana amin'ny fanafarana mivantana solika mba hisorohana ny tranga tahaka izao ».
Asa moa izay ho fihetsik'ireto mpampongady solika ireto amin'izay sazy izay, satria raha misy olana ara-barotra na tsy fanarahan-dalàna na misy fifanolanana eo amin'ny roa tonta nifanao fifanarahana dia ny fitsarana no mamoaka izay didy izay, raha tsy hoe nisy marimaritra niraisana.
Solika: Tonga eto Toamasina ny sambo MT/ MR AQUARIUS mitondra gazoala 36,6 tapitrisa litatra »